MOMBA ANAY US-Square Technology Group Co., Ltd.
Kalitao, fanavaozana, serivisy
Mpamatsy vahaolana mangatsiaka tsara kokoa!
TANINDRAZANA SY FITONDRANA IZAO
Andriamatoa Huang Jie
Square Technology Group Co., Ltd. (izay antsoina hoe Nantong Square) dia natsangan'i Andriamatoa Huang Jie tamin'ny 1986. Izy io dia orinasam-pamokarana fitaovana enti-miasa mangatsiaka miaraka amina tombony feno. Ny orinasa dia miorina ao amin'ny tanànan'i Nantong, faritanin'i Jiangsu. Nandritra ny 30 taona mahery nanaiky ny mpanjifa sy ny fitaoman'ny tsena, "Nantong Square" dia lasa orinasa fampitaovana haingana be mpangataka an-trano.
Nantong Freezing Equipment Co. dia natsangana tamin'ny taona 1986
Vokatra voalohany- Ny vata fampangatsiahana plastika misy ny rafitra fampangatsiahana novolavolaina tamin'ny taona 1987.
Ny vata fampangatsiahana indroa voalohany dia novolavolaina tamin'ny taona 1994.
Ny vata fampangatsiahana lovia dia aondrana voalohany any amin'ny tsenan'i Thailand tamin'ny taona 1995.
Nantong Square Freezing & Heating Mechanical Equipment Co., Ltd dia natsangana ho orinasa mpiara-miombon'antoka tamin'ny taona 2003.
Fampiharana IPO amin'ny taona 2012.
Ny orinasa dia voatanisa ao amin'ny A Shares at Shanghai Stock Exchange amin'ny volana Mey 2016
Ny orinasa dia nomena anarana hoe "Square Technology Group Co., Ltd", manana sampana 5.
Square Technology dia mampiasa ekipa fampandrosoana manokana izay mifantoka amin'ny haitao haingana amin'ny hatsiaka. Ireo mpikambana ao amin'ny ekipa ireo dia manampahaizana manokana amin'ny injenieran'ny frizida, ny injenieran'ny sakafo, ny endrika mekanika ary ny famokarana. Mitazona fiaraha-miasa ara-teknika tsara amin'ireo orinasa vahiny maro izahay, toa ny Mayekawa WFG. Co. any Japon ary Intralox Company any Amerika. Ankoatr'izay, ny orinasanay dia nandalo fanamarinana CE, PED, ary ASME. Nandray anjara tamin'ny famoahana tolo-kevitra iraisam-pirenena marobe ihany koa izahay ary mitazona patanty marobe.
Ny fotodrafitrasa famokarana teknolojia Square dia misy fitaovana fanodinana mandroso, toy ny ivon-toeran'ny fanapahana laser mandeha ho azy, milina fanapoahana fanaraha-maso isa, laharam-pamokarana metaly vita amin'ny vy, tsipika famokarana tontonana, fitaovana fitsaboana ambonin'ny metaly sns. Mandritra izany fotoana izany dia nanamboatra tsipika famokarana tsy miankina ho an'ny evaporator antsika, ny rafitry ny takelaka, ny fitaovana insulation foam, ny milina mandeha ho azy sns. Ny ankamaroan'ny kojakoja fampiasa amin'ny rojo mangatsiaka dia natao tsy miankina ary novokarin'ny Square Technology.